DHIBAATOOYINKA KA SOO JEEDA BOODHADHKA IYO TUUBADA DUSHOODA: MABDA'A HAWLGALKA IYO XEERARKA CODSIGA - GURI, GURI
Sidee u shaqeysaa? Dhibaatooyinka ka soo jeeda boodada iyo shilinta oo ku daboolan
Dhibaatooyinka ka yimaada boodada iyo shilinta, oo ay la socdaan qoryaha iyo buufinta - habka ugu caansan ee lagula dagaalamayo dulinka xayawaanka.
Waa dad caalami ah, oo sahlan in la isticmaalo oo aan jaban.
Aan isku dayno inaan fahamno iyaga si faahfaahsan.
Sida loo dhaqmo
Dhibcaha oo dhan waa isku mid.
Maaddooyinka firfircoon waxay ku ururaan finanka, timaha timaha, iyo dufanka subcutaneous. Dhab ahaan ma ahan in dhiigga lagu nuugo.
Qaybaha ayaa xakameynaya boodada iyo dareenka dareemayaasha, isuduwidda miyir-doorsoonku waa mid dhibsan, paralysis ayaa dhacaya, waxayna dhintaan.
Maxay ka kooban yihiin
Diyaargarowga ayaa si caadi ah u kala qaybsan:
diyaargarowga ku salaysan cayayaanka ee kooxda phenylpyrazoles (fipronil iyo pyriprol);
Diyaargaroobyada ku salaysan pearethroid insecticides (permethrin, phenotrin, etofenprox, cypermethrin) ama xeryaha organophosphate (diazinon).
Caawin! Sidoo kale ka kooban saliido kala duwan oo ka hortagaya cayayaanka walxaha firfircoon.
Dhibcaha qaybaha khudradda waa kala tagsan yihiin (saliida geedka shaaha, okalyptus, citronella, caleenta aloe, tansy, ginseng). Waa ammaan waxay leeyihiin saameyn liddi ku ah fungal, saameynta antiseptic. Si fiican u ciil-qaboojiya dulinka.
Waa muhiim! Dhibco, monocomponent taas oo ah fipronil, ma cabsi karo dulin, laakiin ka hortagga cudurka qaba piroplasmosis. Ticks waxay u dhintaan ka hor inta aysan waqti u helin dhiigga xayawaanka leh piroplasma.
Codso, maqaarka qayb ka mid ah maqaarka xayawaanka u dhexeeya garabka garabka ama qoorta.
Qiyaasta qiyaasta iyo macluumaadka nabdoonaanta ayaa lagu bixiyaa tilmaamaha..
HLama isticmaali karo haddii maqaarku waxyeelo ama qoyan yahay..
Ma loo isticmaali karaa buufin iyo baakado..
Haddii dhibcaha loo isticmaalo markii ugu horreysay, xayawaanka ayaa laga yaabaa inay dareemaan dhuun, iskudhafid. Xayawaanku wuxuu noqon karaa mid walaacsan, niyad jabna.
Haddii ay dhacdo in lagu xadgudbo qiyaasta ama codsiga aan habooneyn (liniqaha xayawaanka macneheedu) macquul ma ahan in aad ka badan tahay. Waxaa lagu muujiyaa neefsashada soo noqnoqota, sigaar-cabid, qandho, walaac. Matag iyo shuban ayaa dhici kara.
Haddii ay dhacdo xaddi badan, waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqdo xayawaankaaga saabbuun.. Calaamadaha xad dhaafka ah waa in la waayaa laba maalmood.
Si loo daaweeyo daawada dusha maqaarka waxay qaadan doontaa 2-3 maalmood. Taas ka dib, ilaalinta xayawaanka ayaa si buuxda u shaqeyn doonta.
Waa muhiim! Si looga fogaado dib u soo kabashada, baddal qashinka uu xayawaanka ku seexdo, ama ku daawee xal aqueous (1: 200) dhibcaha cayayaanka. Qashin la nadiifiyey waxaa loo isticmaali karaa 3-4 maalmood.
La shaqaynta daroogada ma sigaar cabi karin, cabbi karin oo cuni karo.
Baako faaruq ah ayaa dib loo rogaa..
Kadib shaqada, gacmaha ku dhaq saabuun iyo biyo..
Haddii aad xasaasiyad u leedahay daroogada waxaad u baahan tahay inaad aragto dhakhtar. Waxaa lagugula talinayaa inaad keento tilmaamo.
Kala saar xiriirta xayawaanka carruurta yar yar ugu yaraan hal maalin.
Ka soo horjeeda Gooryaanka
Shirkadaha dawooyinka, oo aan ahayn boodada iyo shimbiraha, sii daa daawooyinka antiparasitik adagkuwaas oo saameeya maaha kaliya boodada iyo shilinta, laakiin sidoo kale ka saara gooryaanka.
Marka la diyaariyo laba walxo firfircoon. Hal shay dagaalka lagula kaco (fipronil, imidacloprid), iyo kan labaad (moxidectin, ivermectrin, cidectin), jidhka ka dhex mara maqaarka, oo ku faafaya dhiigga iyada oo loo marayo jidhka, ku xeeldheer mindhicirka iyo caloosha, waxay ku fidisaa wareegga wareegga iyo dirxiga.
Xeerarka loo isticmaalo dhibcaha saxda ah oo la mid ah sida boodada iyo dhibcaha.
Waqtiga tallaabada anthelmintic laga bilaabo 8 ilaa 12 maalmood.
Waa muhiim! Dareemooyinka isku dhafan waa in loo adeegsadaa daryeel fiican. Gaar ahaan moxidectin. Haddii qiyaasta ka baxsan tahay, nidaamka xayawaanka dhexe ee xayawaanka ayaa xanuunsanaya.
Dooro ugu fiican
Rugaha dukaamada iyo farmashiyada xoolaha ayaa soo bandhigaya daraasiin daroogo ah. Kharashkoodu wuu isbedbeddelaa laga bilaabo 50 RUB halkii baakowaxaa lagu horumariyay Ruushka by BlokhNET, ilaa 1500 rubi ee soo dejinta qareenka.
Dhammaan waxay kuxirantahay qiyaasta iyo sharafta shirkadaha. Tusaale ahaan, Bayer laga sameeyey Jarmalka waa mid aad u qaali ah oo ka badan noocyada caanka ah ee guryaha. Laakiin tani macnaheedu ma aha in kuwa guriga ka shaqeeya aysan waxtar lahayn. Soo dejinta markasta waa qaali, waa la jiiday euro.
Ectoparasites waxay qaadi karaan caabuqyo khatar ah (cudurka bacillus, salmonella, cagaarshow infekshanka). Si aan naftooda halis u gelin waxaad u baahan tahay inaad la dagaalanto dulinka xayawaanka. Oo waxay ka caawin doontaa in si fudud loo isticmaalo, qaali ah iyo dhibco wax ku ool ah.